A Bank | MyJobs
/ A Bank
About A Bank
“To become an innovative and dynamicabank in Myanmar with strong commitment to cultivate positive and sustainable outcomes for all stakeholders”
Ayeyawaddy Farmers Development Bank, widely known as A bank,apublic company limited was formed on December 22nd, 2014 under the 3/2014 Financial Law ratified on July 30th, 2014 by the Central Bank of Myanmar. A bank is running nationwide commercial banking operations under licenses authorized by Central Bank of Myanmar. A bank was formed byaset of companies specialized in agriculture businesses throughout the supply chain. The main purpose of A bank is to bring development in agro-based industry through value chain financing i.e. increasing the access to finance at every stage of value chain starting from production to consumption. A bank also intends to support SME development and “Financial Inclusion of Unbanked Population” by delivering technology-enabled, diversified banking products and services through the multi-channel approach. A bank’s majority shareholder is Ayeyarhinthar company with other shareholders including Ayeyarwaddy Regional Government and agriculture-related companies. Currently, A bank has paid up capital of 40 Billion Kyats and intends to grow proportionately every year.
ဧရာဝတီတောင်သူလယ်သမားများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ခေါ်) A bank (အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီ လီမိတက်) ကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ (၃ဝ.၇.၂ဝ၁၄) ရက်စွဲပါ အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂ဝ၁၄ နှင့်ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေအရ ၂၂.၁၂.၂ဝ၁၄ နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့ စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်လုပ်ငန်း နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် လုပ်ငန်းများကို
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ခွင့်ပြုချက်လိုင်စင်များဖြင့် ဆောင် ရွက်နေသည့် ဘဏ်လည်းဖြစ်ပါသည်။
A bank သည် လယ်ယာကဏ္ဍ Supply Chain တစ်ခုလုံးတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ စုပေါင်းခြင်းမှပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
A bank၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ တောင်သူလယ်သမားများ၏ လူမှုဘဝ
မြင့်မားစေရေးနှင့် အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ဖြစ်ပြီး ဘဏ်လုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကို ခေတ်မီနည်းပညာများ အသုံးပြု၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါသည်။
A bank သည် နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းများနည်းတူ လယ်ယာကဏ္ဍတွင် အခြေခံထုတ်လုပ်မှု မှ ဈေးကွက်
ရောက်သည်အထိ Supply Chain အဆင့်ဆင့်တွင် အမှန်တကယ် လိုအပ်နေသူများထံ ထိရောက်သော ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ထားရှိပါသည်။
A bank သည် လက်ရှိတွင် မတည်ရင်းနှီးငွေ ၄၀ ဘီလီယံကျပ် ထည့်ဝင်ထားပြီး အစုရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ၊ ဧရာဟင်္သာဟိုးဒင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့် မိတ်ဖက်အစုရှယ်ယာရှင်များဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
Privilege Banking (Strategy)- Senior Executive
To develop privilege banking strategy and conduct competitive analysis
Branch Manager (ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံ)- မကွေး
For Magway Branch
Head of Branch Network and Operation (Retail Banking)
Responsible for Operations of Branches